Gbasara anyị - Huaian Enyuan Tourist Products Co., Ltd.
Anyị mepụtara gị ngwaahịa mara mma
Anyị bụ Enyuan Travel Products Co., Ltd. Huaian City, Jiangsu Province, China. Ọ bụ a nnukwu-ọnụ ọgụgụ enterprise ọkachamara na mmepụta na ahịa nke onu na-elekọta ngwaahịa. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2017. Mgbe ihe karịrị afọ atọ nke ịrụsi ọrụ ike na mmepe, ọ nweelarị ike siri ike. Ugbu a, o nwere ndị ọrụ nwere ọkaibe ma nwee ikike, a na-ebupụkwa ngwaahịa dị iche iche na mba ofesi. Nwere ahụmịhe ahịa azụmaahịa mba ọzọ na ọbá akwụkwọ ngwaahịa. Ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ ahụ nwere gụnyere brọsh ịsa ahịhịa plastik, ahịhịa achara, ahịhịa ire, brọsh na-ewepụtasị ya, wdg.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 5,000, nke ebe a na-ewu ihe karịrị 4,000 square mita. Enwere ndị ọrụ karịrị 100. Companylọ ọrụ ugbu a nwere igwe nrụpụta 40 maka achara ezé. Igwe ihe eji emepụta ezé iri atọ na usoro mmepụta ihe metụtara nchekwa. A na-emepụta ọtụtụ usoro mmepụta. Nri ezé na-emepụta kwa ụbọchị nwere ike iru 200,000. Omume a na - ewepụta kwa afọ nkecha ncha ezé na-eru nde 50.
Kemgbe 2018, na nzaghachi nke mmachibido iwu European, ụlọ ọrụ anyị agbanweela ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ n'oge, na-elekwasị anya na brọsh na-eme ka gburugburu ebe obibi mara mma achara. Companylọ ọrụ ahụ malitere iwebata akara ngosi brọsh nke brọsh na mba ụwa, ma na-emelite igwe oge niile ma gbanwee usoro mmepụta. Naanị iji mepụta ngwaahịa ka mma. N’afọ abụọ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ enweela ike ịwepụta ihe karịrị ụdị 40 nke achara ezé na brọsh interdental na ngwaahịa eze ndị ọzọ. A na-ere ngwaahịa ndị ahụ n'èzí ma merie otuto sitere na ndị ahịa. Iwu a na-eme kwa afọ nke achara ezé nwere ike iru ihe karịrị nde 20.
The ụlọ ọrụ mgbe niile agbasoro na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ezi uche ọhụrụ, àgwà mbụ". Ejiri maka imepụta ahịhịa ezé ka mma iji jeere ndị ahịa ozi.
Anyị mepụtara ngwaahịa mara mma!